Ozi kacha ọhụrụ banyere nri si Nigeria & ụwa | TAA
Gary Cahill: Moses dị egwu maka Chelsea megide Burnley
Home Tags nri
Tokyo, Hong Kong, Shanghai kwatuo ala ọzọ
Ahia Asia, site na Tokyo na Hong Kong na Shanghai weere ihe ọzọ na Fraịdee dị ka ihe na-eme n'ụwa nile na ịbọ ọbọ na-eme ka egwu na-ebuwanye ibu banyere ọnụego amamịghe nke US.
Ndị na-eme ihe ike kụrụ aka na United States, ọdụm Russia na ATM
Ndị na-agba ọsọ na-asụ asụsụ Russian n'oge na-adịghị anya na-efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10 nde dolla site na ọ dịkarịa ala 18 ka ukwuu n'ime United States na akụ ndị Russia na afọ ole na ole site n'ichebe usoro mgbasa ozi interbank, ụlọ ọrụ nchekwa nke Moscow kwuru.
Onyeisi Chelsea bụ Gary Cahill enyewo Victor Moses aka maka mmeri nke kpakpando nke Nigeria na 2-1 nke Chelsea merie Burnley na nsogbu nke Njikọ Premier England na Thursday na Turf Moor.
Ihe mere m ga-eji bulie Buhari ugboro ugboro
Okwu kachasị mma na mba anyị n'izu a bụ nkwupụta nke President Muhammadu Buhari na ọ ga-achọ okwu nke abụọ n'ọfịs n'afọ ọzọ. Na ndammana otú ahụ. Ọchịchị ọ bụla nke onye ọ bụla President, ma ọ bụ nke ọma ma ọ bụ na-ezighị ezi, kwesịrị ime ka mmasị ụmụ amaala dị ukwuu.
Onye isi nhoputa ndi ochichi bu Imo bu Gọvanọ Okorocha, ndị ọzọ na-ekpe ikpe
Gomina Gọọmenti na Gọvanọ Rochas Okorocha ebugara ya n'ụlọ ikpe site n'aka onye isi oche a na-ekpofu isi nke State Independent Electoral Commission, ISIEC, Barrister Amaechi Nwaoha, n'ihi na e boro ya ikpe na-ezighị ezi site na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ.
Babatunde Fashola: Ndị Naijiria na-enwe ezigbo ike n'okpuru President Buhari
Minista nke ike, ọrụ na ụlọ, Babatunde Fashola, siri ọnwụ na ndị Nigeria nwere ike ịnweta ike mgbe nile n'okpuru nlekọta nke President Muhammadu Buhari.
Ndị ozi: Ndị Nigeria nọ na-arụsi ọrụ ike na United States, iwu na-erubere ya isi
Ndị bi na United States na-arụsi ọrụ ike ma na-erube isi n'iwu, onye nlekọta ndị isi nke Nigeria na Atlanta, Mr Kayode Laro kwuru.
Michael Essien: Antonio Conte kwesịrị ịnọ na Chelsea
Onye na-emebu Ghana Ghana, Michael Essien, gwara Chelsea ka ya na Antonio Conte na-agbanyeghi ọkụ.
Watford na-akpọ Javi Gracia onye na-eme njem Malaga ka Marchang Silva gbanwere ya
Ejiri ngwaọrụ ebubo N40, 000 generator batrị
2019: Enweghị mpempe akwụkwọ akpaka maka ndị ntụpọ - Ngalaba Ọrụ
Paul Scholes: Jose Mourinho kwesịrị idebe Alexis Sanchez maka FA Cup ọkara ikpeazụ
Ònye ga-azọpụta ụfọdụ ndị Naijiria site na umengwụ ọgụgụ isi?
Izu ohi: Ndị uweojii na-agwa ndị nwe ụlọ ọrụ, ndị ọrụ maka 'igbochi ozi'